Laba sir ah
Wakhtiga diirran, waxaad dooneysaa inaadan dareemeynin diirimaad oo keliya, laakiin sidoo kale xirtid ugu yaraan dharka. Ka dib oo dhan, tani waxay si toos ah u saameysaa raaxada sawirka. Sidaa daraadeed, dhar kulul ayaa yimaada si loo bedelo nalalka fudud. Stylists waxaa lagula talinayaa inay doortaan agabka ugu badan ee dabiiciga ah. Oo mid ka mid ah dharkaas, oo dhawaanahan helay sumcad weyn, waa laba farood. Marka la eego in dhar this ay tahay mid cufan ma aha mid aad u soo jiidasho leh, naqshadeeyayaasha waxay bixiyaan qaabab casri ah oo la kulma isbeddellada ugu dambeeya ee miisaanka.
Sariiraha labajibbaaran . Mid ka mid ah qaababka caanka ah ee ugu caansan maanta waa moodooyinka la jarjaray. Saaxiibka tween-ka ah ee haweenka waxaa matalaya muusikada muusikada ah, jibiska , iyo sidoo kale nooca caadiga ah ee adag, dhammaadka suurtogalka ah ee loo yaqaan 'fit-ka' sareeya.
Laba sir ah ayaa la ruxay . Maro qosol leh oo aad u qurux badan ayaa u muuqda gooyo dhedig oo bilaash ah. Doorashada caanka ah waa cirbadda ka soo baxday misigta. Laakin sidoo kale naqshadeeyayaasha waxay bixiyaan surwaal duug ah oo la jaanqaadi karo iyadoo la jarjarayo jajab leh oo ka yar jilibka.
Nabaro yar yar oo gaaban . Noocyada ugu caansan ee la isticmaali karo xilliga kuleylka diirimaadku waa dhererka gaaban ee surwaal. Badanaa, santuuqyadani waxay isku daraan oo ay kala gooyaan qaab cidhiidhi ah. Laakiin qaabka tooska ah, moodooyinka casriga gaaban waxay u muuqdaan kuwo aad u jilicsan.
Maxaa la xirxiray surwaalkiisa?
Naqshadaynta dheddig-laboodka, sida caadiga ah, waxay leedahay qaab naqshad leh oo xaddidan. Sidaa daraadeed, doorasho quruxsan oo la isku dhafay dharka noocan oo kale ah waxay noqon doontaa ganacsi iyo sawir jaceyl ah. Xulashada ugu haboon ee loogu talagalay surwaalka tween waa laaluushka nalalka ah, blown monophonic iyo raglan aan qurux badan iyo qurxinta. Sidoo kale, moodooyinka dabbaasha waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican oo ku jira qaab ku habboon oo leh jaakad ama jaakad tweed ah. Xilliga qaboobaha, xal casri ah oo dharka ka samaysan ayaa noqon doona jaakad gaaban oo ah qaabka Ingiriisiga ah, jaakad dabiici ah ama jaakad madow.
Dharka ka soo jeeda
Joodarka maqaarka leh ee daboolka - 62 sawir oo ah qaababka ugu quruxda badan ee dhadhan kasta
Dukaanka Cashmaca ee Haweenka
Dharka guriga - 42 sawirada qaababka ugu fiican ee dhadhanka kasta
Labbis jilbaha dhaadheer - qaabab casri ah marwalba oo dhan
Haweenka qaboobaha jiilaalka
Boorsooyinka kulaylka ee ka sameysmay maqaar madow
Rinji ranjiga loogu talagalay derbiyada
Sidee loo qaxaa kafeega cagaaran?
Sidee ayuu mar kale ugu jeclaan lahaa ninkeeda?
Burcadbadeedu waa qodob qarsoodi ah
Dib u soo celinta wareegga umusha kadib dhalmada
Maarshib for pizza
Sidee loo kariyaa salad hilib?
Calaamadaha uurku qaboobo
Shukumaannada laga soo qaado gasacadaha
Daanyeer ka dareemo dareemid
Immisa jir ah Shakira?
Pilaf oo ah noocyo kala duwan oo hilibka lo'da ah - cuntada ugu fiican ee saxaraha jilicsan ee Uzbekistan
Gardarrada dhammaan marmarka
Kitaabka Kitaabka Qudduuska ah ee wiilasha
Jimicsiyada derbiga Iswidhishka
Courtney Kardashian waxay dhawaan u noqon doontaa hooyo markii 4aad?
Muraayadaha ladagaallanka ah
Kobaca iyo culeyska Jessica Alba
Sameynta jikada gacmo gaar ah